Guddiga Isgaarsiinta Federaalka (FCC)waa hay'ad madax-bannaan oo ka tirsan dawladda Federaalka ee Maraykanka. Waxaa la abuuray 1934 ficil ka yimid Golaha Congress-ka Mareykanka, waxaana hogaamiya Golaha.
FCC waxay isku duweysaa isgaarsiinta gudaha iyo tan caalamiga ah iyadoo la xakameynayo raadiyaha, telefishanka, isgaarsiinta, dayax gacmeedyada, iyo fiilooyinka. Waxay ka kooban tahay in ka badan 50 gobol, Columbia, iyo dhulal ku yaal Mareykanka si loo hubiyo badbaadada alaabada isgaarsiinta raadiyaha iyo siligga ee la xiriirta nolosha iyo hantida. Aqoonsiga FCC - Shahaadada FCC - ayaa looga baahan yahay codsiyo badan oo raadiyaha ah, alaabada isgaarsiinta, iyo alaabada dhijitaalka ah inay soo galaan suuqa Mareykanka.
1. Bayaanka waafaqsanaanta:Qaybta mas'uulka ka ah badeecada (soo saaraha ama soo dejiyaha) waa inay ku tijaabiyaan badeecada machadka imtixaanka u qalma ee ay u xilsaartay FCC oo ay sameeyaan warbixin tijaabo ah Haddii badeecadu buuxiso heerarka FCC, badeecada waa in lagu calaamadeeyaa si waafaqsan, iyo buuga isticmaalaha ayaa ku dhawaaqi doona in badeecada ay la egtahay heerarka FCC, iyo warbixinta baaritaanka waxaa loo hayaa FCC si ay u codsato.
2. Dalbo aqoonsi.Marka hore, codso FRN si aad u buuxiso foomam kale. Haddii aad codsaneysid Aqoonsiga FCC markii ugu horreysay, waxaad u baahan doontaa inaad dalbato CODE GRANTEE oo joogto ah. Inta la sugayo ogolaanshaha FCC si loogu qaybiyo Codsadaha Koodhka Codsadaha, Codsaduhu waa inuu si dhakhso leh u tijaabiyaa Qalabka. FCC waa inay ansixisaa Xeerka Deeqaha illaa inta laga soo diyaarinayo gudbinta loo baahan yahay oo dhan FCC iyo Warbixinta Imtixaanka la dhammaystiray. Codsadeyaashu waxay buuxiyaan Foomamka FCC 731 iyo 159 khadka tooska ah iyagoo adeegsanaya Xeerkan, warbixinta baaritaanka, iyo qalabka loo baahan yahay. Marka la helo Foomka 159 iyo xawaaladaha, FCC waxay bilaabi doontaa ka shaqeynta codsiyada shahaadada. Celceliska waqtiga ay FCC ku qaadato in ay ku shaqeyso codsi aqoonsi waa 60 maalmood. Dhamaadka howsha, FCC waxay u soo diri doontaa codsadaha deeq lacageed asal ah oo wata aqoonsiga FCC. Kadib markuu codsaduhu helo shahaadada, wuu iibin karaa ama dhoofin karaa alaabada.
Tafatirka qodobada ciqaabta
FCC badanaa waxay ku soo rogtaa ciqaab adag badeecadaha jebiya xeerarka. Darnaanta ciqaabtu guud ahaan waa ku filan tahay inuu dembiilaha ka dhigo mid kacsan oo aan soo kaban karin. Marka dad aad u tiro yar ayaa si badheedh ah u jebin doona sharciga. FCC waxay ciqaabaysaa iibiyeyaasha alaabada sharci darrada ah siyaabaha soo socda:
1. Dhammaan alaabooyinka aan buuxin tilmaamaha waa lala wareegayaa;
2. In lagu soo rogo ganaax dhan 100,000 ilaa 200,000 oo dollar qof kasta ama urur kasta;
3. Ciqaab laba jibbaar wadarta dakhliga iibka alaabada aan u qalmin;
4. Ciqaabta maalin kasta ee xadgudub kasta waa $ 10,000.